Makirabhu ndeemunhu aunofarira, mitambo yekutamba zvakaenzana saizvozvo. Iyo yakanaka yemhando yekutamba keyboard inogona kuita mutsauko wese kana iwe uri mukati mekupisa kwehondo. Iwo akanakisa emakaniki emabhodhi haangopi chete yekuwedzera kiyi yekufamba, asi sarudzo yemabatiro ekupindura uye simba rekusimudzira iro rinogona kugadziridzwa zvinoenderana nezvaunoda uye zvaunofarira. Iwe unogona kusarudza chinyararire kiibhodhi, asi pane zvakare chimwe chinhu chinofanira kutaurwa nezwi rakanyanya uye rakarurama Cherry MX Blue kiyi.
Kubhejera makhibhodi kazhinji anowanzovakwa kuti agare, nekuyedzwa kwakasimba kuona kuti kiyi yega yega inogona kubata makore ekushandisa uye kushungurudzwa kwavachaiswa. Kugadzira iko kutenga chaiko zvinoreva kuti iwe unogona kuve nechokwadi chekuti kunyangwe iwe uri wehasha gamer, iwe uchave uine keyboard iyo inogara uye inoramba ichinyatsoita kweanotevera makore.
Aya akakwirira-ekupedzisira emitambo makirabhu zvakare anosanganisira maficha anotendera kubatwa kwemazhinji keypresses kamwechete, kurekodha tsika macros uye mushandisi-akasarudzika maratidziro emwenje. Aya maficha anoita musiyano mukuru kune mashandiro aunoita nekutamba nekhibhodi yako.
Isu taisa huwandu hwemakhibhodi kuyedza kuti utsvage zvakanakisa uye nekukubatsira iwe kusarudza kuti ndeipi yakakunakira iwe.
Yakanakisa yakazara mutambo wemitambo
Kana iwe uchida kubhadhara mutengo unorema wekhibhodi yemitambo yako uye iwe uchingoda chete zvakanakisa saka iyo Corsair K95 Platinum XT ingangove iri yako yepamusoro kubheja. Ndiyo imwe yemabhadhibhodhi emitambo inodhura zvakanyanya, asi zvakare ndeimwe yemakona-akazara makirabhu ataona.
Vaka mhando uye dhizaini maficha
Ndege-giredhi brushed aluminium furemu
Yakarukwa USB tambo
Spare USB yekuisa neye tambo manejimendi maficha
Iyo Corsair K95 Platinum XT ishanduro yakakwidziridzwa yeiyo yapfuura K95 Platinum iyo inounza zvimwe zvinhu uye dhizaini dhizaini yatinoda.
Yakavakwa nekutarisisa kuri pachena pahunhu; iyo yepamusoro-yekupedzisira mitambo yekutamba ine zvese maficha izvo gamer ingangoda. Iwo hwaro hwakasimba, huremu uye hwakasimba - hwakavakirwa neiyo ndege-giredhi brushed aluminium furemu iri pasi pechinhu asi yakasarudzika.
Tambo yakakora yakarukwa USB inosangana nePC yako kuburikidza nemaviri ma USB macomputer, izvi zvinodikanwa kuti ushandise keyboard uye nekukupa iwe mukana wekupfuura. Pasi payo pane criss-muchinjiko wemakambani manejimendi nzira dzinokutendera kuti ushandise zvakaringana iyo yekuwedzera USB chiteshi pamusoro pekhibhodi kubaya mune zvimwe zvinongedzo.
On-the-kubhururuka marongero uye makiyi mashandiro
Makiyi matanhatu akatsaurwa macro (ikozvino ine Elgato inoenderana S kiyi)
Kuvhenekesa, chimiro uye windows kiyi regedza bhatani
Multimedia makiyi uye vhoriyamu vhiri
Iyo Corsair K95 Platinum XT inoratidza mashoma emakiyi ekuwedzera ekukurumidza uye nyore kushandisa chero zvauri kuita. Iko kune akajairwa multimedia (kutamba / kumbomira / kumira / kusvetuka) makiyi, pamwe nevhoriyamu vhiri uye mbeveve bhatani remimhanzi kutamba. Makiyi matanhatu akatsaurwa macro anogarawo kuruboshwe rwebhodi kupa mukana kune macro akagadzirwa paunenge uchiada panguva yemutambo.
Pamusoro, pane matatu makiyi ekuchinja pakati pemaprofiles akachengetwa pane iyo keyboard memory, kutendeudza iyo windows kiyi uye kudzima uye kugadzirisa kupenya kwekudzoka kwemwenje.
Mabhatani uye nyaradzo
Cherry MX RGB Yekumhanyisa Sirivheri, bhuru kana bhuruu makiyi
100 muzana anti-chipoko
Inosvikika padded leatherette wrist zororo
Chingachinjika zvigadzirwa zvemitambo zvemitambo yeFPS neMOBA mitambo
Iyo Corsair K95 Platinum XT inoshandisa Cherry MX RGB switch nesarudzo yesarudzo inosanganisira Speed ​​Silver (45g actuation, 1.2mm chinhambwe), Brown (55g actuation simba, 2mm chinhambwe) neBlue (60g actuation simba, 2.2 daro). Izvi zvinokupa sarudzo yezwi uye mhinduro, zvinoreva zvakare kuti kune yekumhanyisa-inokurumidza nhanho yekumisikidza yakasununguka yekutaipa kwemazuva ese sezvazviri pamitambo.
Izvo zvakakosheswa kwatiri pano ndezvinogona kuchinjika zvakagadzirwa zvemitambo makiyi. Iwe unogona kuburitsa kunze kweQ, W, E, R, A, S, D uye F makiyi uye nekuchinjanisa ivo kune mamwe mavara akaiswa mubhokisi. Aya makiyi zvakare akatsvedza zvishoma kumicheto, zvinoreva kuti vari nyore kunzwa uye kusiyanisa kubva kune mamwe makiyi pane iyo keyboard. Izvi zvinoreva kuti, kunyangwe nemwenje wadzimwa, unogona kuve nechokwadi kuti une zvigunwe munzvimbo chaiyo paunenge uchitamba.
Ivo vakasununguka zvakakwana kuti vashandise kunyora kwemazuva ese uye yakapusa, asi kugamuchirwa kuwedzera kune dhizaini iro rakanaka kune vanofarira vatambi. Iyo spacebar zvakare ine akafanana akafanana nayo kune iyo inovimbisa munwe wako hauzotsvedza kana iwe uchinge uchimhanyisa nzira yako pamusoro pemasvingo nezvipingamupinyi mumutambo.
Iyi ikhibhodi inoshamisa. Iyo yekuzorora huru yechiuno inosanganisira yakapetwa-mativi akapetwa nzvimbo pane yemagineti yerabha mat iyo inogona kutenderedzwa pamusoro nyore. Kana usiri fan of zororo zororo unogona kuibvisa futi, asi isu tinokurudzira zvikuru kuichengeta sezvo iri nyore kwazvo.
Iyo Corsair K95 Platinum XT inozvirumbidza zana muzana muzana yekurwisa-ghosting tekinoroji kuti ive nechokwadi chekuti mabhatani anogara achizivikanwa uye akanyatso kunyorwa. Akawanda keypresses anokwanisa uye isu takawana iyi keyboard ichinyanyisa kugona zvese typing uye mitambo yemitambo.
Kuvhenekesa kugadzirisa uye kuyananisa
RGB yekuvhenekesa mwenje inogadziriswa pane yega-kiyi hwaro
Mheni yekubatanidza kuyananisa mavara pamwe nezvimwe zvigadzirwa zveCorsair
Chiedza chemwenje chakakwira pamusoro pekhibhodi
Iyo Corsair K95 Platinum XT inoshandisa yakazara RGB mwenje ine yega kiyi maseturu. Kune akati wandei eakajairwa marongero anosanganisira akasiyana siyana emhando sarudzo uye mifananidzo. Izvi zvinosanganisira muraraungu, mvura, visor, kushanduka kwemavara uye zvimwe zvakawanda. Zvakanyanya kukosha kwatiri kugona kugadzirisa makiyi mumwe nemumwe, saka unogona kuseta akasiyana kiyi mavara zvinoenderana nezvaunoda. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona, semuenzaniso, kusimbisa kiyi yega yega pabhuruu tsvuku uye wozoisa W, A, S, D kuchena.
Kunyangwe tambo yekuvhenekesa pamusoro pebhodhi yakakamurwa kuita zvikamu zvinogona kuvhenekwa zvakasiyana nemamwe mavara. Pazviruva zvisirizvo, mwenje wakanaka uye unonakidza. Tinoda magadzirirwo etsika, asi zvakare takanakidzwa nezvinhu zvakaita se "mhando mwenje" iyo inotumira ripple yevara paunenge uchinyora kana kuwedzera chinodzima kara shanduko kumakiyi awakatsikirira iwe paunenge uchinyora.
Iyi keyboard zvakare inosanganisira "Lighting Link" mashandiro ayo anoitendera kuti ienzanise mavara nezvimwe zvigadzirwa zveCorsair, zvinosanganisira mbeva nemisoro yemusoro.
Iyo Corsair K95 Platinum ndiyo yataifarira kutamba mutambo uye ikozvino, iyo nyowani uye yakagadziridzwa K95 Platinum XT inotonga kwazvo. Kukwidziridzwa pamusoro peiyo yapfuura modhi kunosanganisira PBT yakapetwa kaviri-yakapetwa makiyi seyakajairwa, Makiyi eBlue S anoshanda neElgato Stream Deck, zororo rakapetwa reruoko, 8MB yeboardboard profile yekuchengetedza ine anosvika mashanu ma profiles uye nesarudzo yekuchinja.
Iyi ndiyo kirimu yechirimwa kana zvasvika pamabhodhi ekutanga emitambo. Pane zvakawanda zvekuda pano. Iyo yekuvaka mhando uye yakasimba dhizaini yakanakisa. Mheni inoshanduka zvakanyanya uye makiyi eCherry MX RGB akasununguka, akarurama uye anogutsa futi.
Zvakanyanya kukosha kwatiri zvinosanganisira zvidiki zvidiki zvinoita musiyano mukuru - izvo zvinoshandisirwa zvigadzirwa zvemitambo zvemitambo, iko nyore kuwana macro uye multimedia makiyi uye dhizaini dhizaini.
Zvese izvi zvinhu zvakabatanidzwa zvinokonzeresa yedu yekunakidzwa yemitambo kiibhodhi uye yedu yekurumbidza kwese kwakanakisisa emitambo kiibhodhi yaunogona kutenga.
Yakawanda yakanakisa yemitambo keyboard
Zvinogona kunge zvisingave kune kuravira kwemunhu wese, asi iyo Roccat Vulcan 122 AIMO iri, mupfungwa medu, imwe yemhando yepamusoro uye inonakidza inotarisisa mitambo yekutamba yatakaona. Iyo nyowani nyowani uye kunyange snazzier inotarisisa vhezheni yeVulcan 120 keyboard yatakaona kare asi iine imwecheteyo yekufadza kukwidza.
Iyi keyboard inoratidzira yakasimudza keycaps uye yakajeka switch dzimba izvo zvinoguma mune chaiyo snazzy kutaridzika uye kunzwa iyo inobvumidza yakawanda mwenje kubuda ropa husiku nesikati. Kune vateveri veRGB yekuvhenekera, iyo Roccat Vulcan mufaro wechokwadi, asi zvakanyanya kupfuura izvozvo futi.
Anodised aluminium goko
Yakadzika-chimiro keyboard dhizaini
Chinobviswa ergonomic wrist zororo
Iyo Roccat Vulcan 122 inoratidzira yemhando yepamusoro dhizaini uye inovaka iyo inodadisa anodised aluminium ganda rinotaridzika uye rinonzwa kunge simbi yakakweshwa uye rinopa kupera kukuru. Iyo inoratidzira yakaderera chimiro dhizaini inoreva kuti inogara yakadzika padhesiki, asi inomira kunze pakarepo nekuda kwekiyi dzakasimudzwa. Aya akasimudzwa uye akapfupiswa kukwirira keycaps inobvumidza maoodles echiedza kubuda ropa uye kugadzira mamwe emamwe snazziest RGB mwenje hues dzatakaona. Iyi dhizaini zvakare inoita kuti zvive nyore kuchengeta iyo keyboard yakachena uye isina mahwanda.
Zororo rinobviswa remaoko uye tsoka dzekupidigura dzinokutendera kuti uchinje nyaradzo kune zvaunofarira zvakare.
Iyo inogutsa inovhiringidza vhoriyamu vhiri rinobuda kunze kumusoro kurudyi ichikubvumidza iwe kugadziridza zviri nyore mazinga eruzha pane-iyo-kubhururuka. Midhiya makiyi uye mamwe makiyi ekushanda akavakirwa mukati maF makiyi futi, saka hapana chakawandisa chebhatani rekuwedzera apa - zvichireva kuti dhizaini iri nyore kugadzirisa kune chero munhu.
ROCCAT-yakagadzirwa Titan Swichi
Ultra-mwenje keycap dhizaini
1.8mm actuation, 3.6mm kiyi yekufamba
Iyo Roccat Vulcan 122 AIMO inoshandisa iyo Titan kiyi switch switch ine ultra-mwenje keycaps ayo ari makumi mashanu muzana muzana akareruka kupfuura akajairwa makapu. Izvo zvakagadzirirwawo kuve nyore kuchengetedza pamwe neyakaganhurirwa nzvimbo yetsika mamakhibhodi, asi nehurefu hupfupi iyo inobvumidza kuve nyore kuchenesa uye kutaridzika kutaridzika uye kunzwa.
Ivo zvakare vanobuda vaine zvishoma zvinogutsa kana iwe uchifanira kuenda pasi pekuchenesa, asi iyo yakasimudzwa dhizaini zvinoreva kuti zviri nyore kwazvo kuwana ivhu uye guruva kubva pane ino keyboard nyore. Yakadzvanywa mweya uye microfibre jira rinoita basa rakareruka rekuchenesa, asi kunyangwe kusimudza kuri nyore kwakaringana kubvisa zvakanyanya kusvibiswa.
Isu tinofara kutaura makiyi akasununguka, akarurama uye anogutsa chero zvauri kuita. Iyi haisi keyboard yakanyarara, asi ine ruzha, inodada uye yepamusoro michina keyboard.
Takawana Vulcan 122 kuve mufaro wekushandisa kwezuva nezuva kunyora, asi zvakare ine simba uye inoshanda panguva yakanaka yekutamba. Iwo ekufamba uye ekumanikidza mazinga anogutsa, kunyangwe kune anorema-akagonesa vatambi pakati pedu.
ROCCAT Easy-Shift [+] tekinoroji
Inoenderana neRoccat Swarm
Makiyi ese anokwanisa kudzokororwa pamwe neakabatana macro uye masetingi ndangariro
Iyo Roccat Vulcan 122 inogadziriswa zvizere zvakare. Yakagadzirirwa kushanda ne Roccat Nyuchi software inopa vashandisi mukana wekuwanda kwenzvimbo dzekugadzirisa uye sarudzo dzekugadzirisa.
Imwe neimwe kiyi pane iyo keyboard inogadziriswa kubva pano. Izvi zvinobvisa kudiwa kweakasiyana macro makiyi, asi zvakare zvinoreva kuti iwe unogona tweak iyo keyboard kusvikira moyo wako wagutsikana.
Kubva pano iwe unogona zvakare kushandisa iyo Easy-Shift mashandiro. Iyi sarudzo yakajeka iyo inokutendera iwe kusarudza chero kiyi pane iyo keyboard uye nekupa imwe imwe keypress, macro kana imwe kumisikidza kwairi.
Isu takagovana Nyore-Shift kukiyi yekuvhara (nekuti ndiani akatsamwa zvakadaro?) Uye ndokumisikidza dzakasiyana siyana dzinonakidza marongero. Zvakareruka zvinhu senge Nyore-Shift + 1 kuvhura maneja maneja kuuraya chirongwa chakarembera kana kutaura mbeya maikorofoni, vhura yakatarwa dhairekitori, kuvhura webhu bhurawuza. Mikana yacho inoita kunge isingaperi. Iri ibasa rakareruka zvakakwana asi rinoita kuti iyo keyboard ishandike kusimba uye inonakidza kwazvo.
Kuti ubvise zvinhu kumberi, kune zvakare mana maficha maseticha akavakirwa mubhokisi iro raunogona kushandura pakati pekushandisa iyo F1 kusvika F4 makiyi. Izvi zvinokutendera iwe kumisikidza akasiyana profiles uye marongero emitambo yakasiyana uye akasiyana mamiriro. Kana uine sarudzo yekushandisa mu Windows ipapo kurongedza kwakasiyana zvachose kwekutamba mitambo, ipapo izvo zviri nyore kuronga zvakare.
RGB kuvhenekera nemamirioni emamirioni 16.8
Inogadziriswa pane yakakosha-ne-kiyi hwaro
Multiple mwenje sarudzo
RGB mwenje zviri pachena chikamu chikuru cheiyi dhizaini dhizaini. Yakakura, yakashinga uye yakajeka. Sarudzo dzekuvhenekesa zvakare dzakanyanya kugadzirisa. Iwe unogona kusarudza kubva kune dzinoverengeka kiyi dzekuvhenekera sarudzo muiyo Swarm software inosanganisira:
AIMO akangwara mwenje - iyo modhi inobata zvine hukama nenzira yaunoshandisa iyo keyboard uye inoguma mukuyerera kwemavara kufamba uye shanduko
Wave - yakapusa modhi inoshambidza mavara pese pabhodhi mubhaidhi-senge pateni
nyoka - semutambo weNokia wekare, izvi zvinoshandisa mwenje kutsvaga nyoka ine mavara pane yako keyboard paunenge uchishanda kana kutamba
Yakazara mwenje - inoisa iyo keyboard kune yakasarudzika tema tema mune gradient maitiro uko inopenya kune mumwe mugumo uye kusviba kune imwe (tsvuku kuita orenji semuenzaniso)
kurova kwehana - inonakidza kupuruzira mwenje kubva chero kumagumo ekhibhodi ichiteedzana
Kupisa - yakafanana nekurova kwemoyo kunze kwekupa iyo pfungwa yekufema kuburikidza nepakati pechiedza
Kupera FX - izvi zvinoita kuti kiyi yega yega ivheneke sezvaunenge uchinyora, wozopera
Ripple FX - Ripple yakafanana nekupera, kunze kwekutsemuka kwemavara kunopararira pese pabhodhi nekiyi bhatani
tsika - Pano unogona kuronga makiyi ega ega kana nzvimbo pane iyo keyboard (WASD, museve makiyi, numpad, nezvimwewo) nemarudzi akasiyana
Mazhinji eaya maratidziro emwenje emwenje anogona zvakare kugadziriswa mune zvese kumhanya kwavanoita uye kupenya zvakare. Iyo AIMO yekuchenjera mwenje modhi ingangoita zvatinoda. Izvi zvinonzi "organic" zvinoreva kuti inoshanduka kwete nekufamba kwenguva chete, asi zvakare inoitirana nenzira yaunonyora. Iyo inonakidza kara inoshandura sisitimu iyo inoreva kuti iyo keyboard inogara ichinakidzwa yakavhenekerwa. Iyi modhi inobvumidza zvakare kuvhenekera pamwe nemamwe maRoccat zvinongedzo - saka mbeva yako zvakare ichapenya nemufaro unowirirana hue.
Isu takawanawo nemuchina weFX bhatani, unogona kushandisa vhoriyamu vhiri kuti uchinje marongero futi. Inogona kushandiswa kudzikisira kupenya kana pane mamwe maodhi kutamisa mavara kutenderera kune akasiyana mativi ekhibhodi.
Iyo Roccat Vulcan 122 AIMO ibwe rakavanzika rekhibhodi iyo isingafanire kufuratirwa. Iyo inoratidzira iri nani zvirinani kuvaka mhando kupfuura mamwe maRoccat makhibhodi atakaedza uye izere izere nezvinhu zvinonakidza zvinoita kuti zvive zvinonakidza kwazvo kutamba nawo.
Isu tinonyatsoda iyo quirky yakaderera-chimiro, yakasimudza keycap dhizaini uye nzira iyo RGB magetsi anoshanda nekuda kweizvi.
Zvimwe zvakakosha zvakanyatso sanganisira kushanduka kwekhibhodi nekuda kweRoccat Swarm software. Kugona kuronga yega yega yega kiyi pane iyo keyboard kwete chete neakasiyana marongero uye macro asiwo neEasy-Shift zvinodzora zvinoita kuti iyi keyboard ishandiswe zvakanyanya.
Iyo Roccat Vulcan 122 zvirokwazvo inomira kubva muchaunga uye yakakosha kudyara.
Yakanakisa isina waya yemitambo keyboard
Corsair K57 RGB isina waya yemitambo keyboard
Vakakomba vatambi dzimwe nguva vanonyara kubva pamitambo yemitambo isina waya, kungave kutya kuti pachave nenyaya ne lag uye latency kana kuti mabhatiri anozopera pakati pechikamu chemitambo. Asi pane chimwe chinhu chinofanira kutaurwa nekuda kwekusina waya. Pasina kushatisa padhesiki rako, nzira shoma dzekuti mbeva yako ikwanise kubatika uye nyore uye kutakurika futi.
Apa ndipo panogara iyo Corsair K57 RGB isina waya keyboard. Pepa, chinhu chinonakidza chezvikonzero zvinoverengeka, chisiri chidiki pane ichi chivimbiso chinosvika maawa zana nemakumi manomwe nemashanu ehupenyu hwebhatiri pamwe chete nesarudzo dzakawanda dzekubatanidza zvakare.
2.4Ghz Slipstream wireless, Bluetooth 4.2 LE uye wired yekubatanidza sarudzo
Capellix LED ine yega-kiyi yekuvhenekera sarudzo
Detachable chiningonono zororo
Chekutanga uye pamberi pezvese, iyo Corsair K57 RGB isina waya keyboard iri kufadza nekuda kwezvikonzero zvakafanana zvatakada isu iyo Corsair IronClaw. Inozvirumbidza neCorsair's Slipstream wireless technology, asi zvakare zvinokwanisika kushandisa iyo keyboard ine Bluetooth 4.0 zvishandiso kana kungoiswa mukati neiyo tambo yeUSB. Isa zvakapusa izvi zvinoreva kuti iwe unogona kubaya iyo dongle muPC yako huru, asi zvakare, kana uchida, tora uende nayo kuti ubatanidze kune chimwe chishandiso kuburikidza neBluetooth.
Iyo K57 inovakwawo nehurefu hwebhatiri mupfungwa kuti iwe usarambe uchizviwana iwe uchifanira kupinha mukati kupokana nebheteri rakadirwa. Iyo kambani inoti iwe unogona kuwana yakawanda seye 175 maawa ejusi kunze kweiyi khibhodi ine RGB kuvhenekera uye maawa makumi matatu nemashanu max nayo yakavhurwa. Isu takaona kuti hatimbo fanirwe kubhadharisa, kunyangwe kana tichiishandisa zuva rese rekushanda uye husiku hwese kumitambo.
Iyi keyboard inoshandisa Corsair's Capellix LED tekinoroji kuona kuti iwe uchiri kuwana kushinga uye kupenya mwenje paunenge uchizvida, asi munzira ine simba-inoshanda inogoneka. Iwe unogona kufunga kuti izvi zvinoreva kuregererana maringe neyechinyakare backlit keyboard, asi zvirokwazvo haina. Kuvhenekera kwakashinga, kwakanaka uye kwakajeka. Iyo zvakare ndeye-kiyi-uye yakanyatsogadziriswa muCorsair iCue software futi.
Mamwe magadzirirwo akakosha anosanganisira yekuzorora, inowoneka wrist zororo, nyore-kuwana midhiya makiyi, matanhatu akazvitsaurira macro makiyi uye nezvimwe. Isu tinodawo kuti zvinongoerekana zvaenda kunorara kana zvisiri mukushandisa kuchengetedza bhatiri uye zvese zvinotora ikiyi keypress yekumurova zvakare muhupenyu.
Makiyi enhau akazvitsaurira
Onboard macro rekodhi bhatani
Kunge zvimwe zvigadzirwa zveCorsair, iyo K57 keyboard inowirirana neCorsair's iCue software uye unogona kuigadzira kusvikira zvirimo zvemwoyo wako mukati meiyo system. Kuti zvive nyore hazvo, zvakare yakagadzirirwa neyakavakirwa-mukati, pabhodhi makiyi ekurega iwe uishandise pane-iyo-kubhururuka. Iwe unogona kuchinja maratidziro emwenje nemawoko mashoma kana kutomboita zvinhu zvine hungwaru kunge rekodhi macros usina kana kuvhura software.
Kunaka ndiro zita remutambo nekiyi keyboard. Yakagadzirirwa kuve nyore-kuwana chero kwaunenge uchiishandisa uye mashandiro acho akafa nyore kushandisa zvakare.
Sezvaungatarisira, kune zvekare zvakajairwa makiyi futi. Pane makiyi enhau akazvipira anokurega iwe utambe, kumbomira uye kusvetuka mimhanzi yako yaunofarira. Pane Windows kiyi yekuremadza bhatani kuti idzivirire kubva mukukanganisa musangano wako wemitambo uye nezvimwe.
MuICue software, haugone chete kuronga macros, asi iwe unogona zvakare kuita zvimwe zvinhu senge remap mabhatani, seta chaiwo mabhatani kuvhura mamwe mapurogiramu uye zvimwe zvakawanda.
Anti-ghosting ine yakasarudzika 8-kiyi roll-pamusoro
Rubha inotonga tactile makiyi
Iyo Corsair K57 keyboard haisi yemuchina keyboard. Iyo yakanyarara kupfuura iyo, asi ichiri inoteerera uye inonakidza kushandisa mune chero mamiriro ezvinhu. Nemabhaudhi anotonga keycaps, isu takawana iyo K57 kuva yakanyarara uye kugadzikana kana tichishanda mukati mezuva uye kwete zvakare kubhadharisa paminwe patinenge tichirovera kure tafura yedu.
Asi zvakagadzirirwawo kuti zvisakuregedze iwe mukati memutambo. Iyo K57 inovakwa neanti-ghosting, inosarudza 8-kiyi roll-pamusoro izvo ndezvechokwadi uye zvinopindura futi. Iwe unogona kuisa makiyi akawanda kamwechete uye woita kuti iyo keyboard ipindure sezvainofanirwa. Kana iwe uri wehasha, wakakomba gamer iyo inoda zvakanakisa, iyi isina waya keyboard haikurege iwe pasi.
10 pre-yakaiswa pabhodhi marongero emwenje
Kuvhenekesa mapfupi ekhibhodi yemhedzisiro uye mashandiro
Matanho mana eRGB backlighting
Maitiro ekugadzirisa maitiro muICue software
Sezvatakambotaura, maCorsair Capellix ma LED anoreva kuti iyo K57 haisi yekutsvedza kana zvasvika kune RGB mwenje. Iyo inouya nemwenje gumi yekuvhenekesa pa-bhodhi iyo iwe yaunogona switch pakati pakati nekudzvanya iyo FN kiyi uye nhamba manhamba (10 kusvika 1). Izvi zvinosanganisira zvinonaya muraraungu, mvura, murarabungu wave, visor, mhando yemwenje (kiyi), mhando yemwenje (ripple), kushanduka kwemavara, kupomba kwemavara, wave wave uye kumira. Nedzimwe dzenzira idzi, unogona kushandisa iyo FN kiyi pamwe neinongedzera museve kugadzirisa iko kumhanya kana kwekutungamira kwechiedza. Ichimhanyisa, chinonoke kana kungoita kuti iende neimwe nzira, sarudzo ndeyako.
Iyi yakapusa, pane-iyo-kubhururuka kubhururuka yakanaka uye inoita kuti hupenyu huve nyore, asi iwe unogona zvakare kukwira muICue kunyora macros, tweak masetingi kana kugadzirisa mwenje pane yakakosha-ne-kiyi hwaro kana iwe uchida kudaro. Unogona kuita izvozvo kuburikidza neSlipstream isina waya yekubatanidza zvakare, saka hautombofaniri plug mukati kuti uchinje.
Isu takanyatsonakidzwa nenguva yedu neCorsair K57 isina waya yemitambo keyboard. Izvo hazvikanganise mune chero nzvimbo. Yakagadzikana, inokwanisa uye inoiswa-yakazara zvakare. Iyo yakanyatsogadziriswa uye nyore kushandisa. Hupengo hwebhatiri hupenyu hunoreva kuti unongoramba uchienda uye uchienda uye katatu nzira dzekubatanidza sarudzo zvinoreva kuti zviri nyore kubvuta uye kuenda newe chero kupi.
Kuva newaya shoma padhesiki ibhonasi yakawedzerwa, asi iyo K57 yakanyanya kuwanda. Kuvhenekera kunonakidza, chishandiso chakanakira nhumbi yako yekutamba uye zviri nyore paminwe zvakare. Kana iwe uchitsvaga kuimba-kwese, kwese-kutamba isina waya mitambo yekutamba, saka usatarise kumberi nekuti ndizvozvo.
Yakanakisa Tenkeyless yekutamba keyboard
Iyo Logitech G915 TKL ndeye compact tenkeyless vhezheni yekambani izere-saizi yepamberi yemitambo keyboard. Iyo iri nyore-pane-iyo-ziso, rakarongedzwa rakagadzirwa kititi rakagadzirirwa kuti rive compact pasina kurerutsa.
Haisi chete tenkeyless keyboard chero, zvakare iri isina waya - neiyo inopenga bhatiri hupenyu iyo inogona kukuwanira iwe kwakawanda semazuva 135 ekushandisa pane imwechete kubhadharisa (chero bedzi usingashandisi iyo RGB mwenje). Icho chigadzirwa chekutanga kunyangwe uye ichiuya nemutengo wepamusoro mutengo kuenderana, asi zvakakosha here?
Brushed aruminiyamu chiwanikwa chepamusoro kesi
Inobatika micro-USB tambo
Ose maviri maBluetooth neLogitech Lightspeed isina waya kubatana
Dzakatsaurirwa midhiya makiyi uye vhoriyamu vhiri
Iyo Logitech G915 TKL inozadza kuvaka mhando. Iyo inotamba brushed aluminium chassis uye compact furemu. Yakagadzirirwa kutora kamuri shoma padhesiki rako, asiwo kuve wakasununguka kushandisa nekuda kweiyo yakaderera chimiro dhizaini.
Iyo G915 TKL inogona kunge iri diki, asi haina kukanganisa. Ehe, iwe unowana mashoma makiyi pane akazara-akaenzana keyboard, asi Logitech yaisanganisira yakatsaurwa midhiya makiyi, vhoriyamu vhiri uye nezvimwe. Iwo makiyi macro kubva kuzere-saizi vhezheni akaendeswa mumakiyi ekushanda uye kune mamwe mashoma ma tweaks ayo anozopedzisira achifadza.
Chimwe chakadai chiitiko ndechekuti chinoshanda munzira dzakawanda. Iwe unogona kuvhara muLightspeed isina waya dongle uye ubatanidze mushe nenzira iyoyo ne1ms report rate kana iwe unogona kuibatanidza neyakagadzirwa neBluetooth kana kushandisa mune wired mode. Zvimwe zvinhu zvakapusa zvinosanganisira nzvimbo yekuchengetera iyo diki Lightspeed dongle yeinenge isiri kushandiswa - zvichireva kuti hauzombozviisa netsaona.
Kunze kwekunaka kwakanaka, iyo G915 TKL yakagadzirirwawo kuendesa zvinhu zvekutamba futi. Iyo yakavakwa neakaonda makiyi ekuchinjisa uye makiyi switch anove akagadzirirwa kuve hafu yekukwirira kwetsika maswichi uye inopa makumi maviri neshanu muzana nekukurumidza kuita pamwe neiri nani yekutaipa ruzivo.
Kailh kiyi switch
Sarudzo yeGL Clicky, GL Linear uye GL Tactile switch
1.5mm actuation, 2.7mm yekufamba nzvimbo uye 50g yekumisikidza simba
Yakaderera mbiri keycaps
Iyo G915 TKL inosanganisira sarudzo yeGl Clicky, GL Linear uye GL Tactile switch (unogona tsvaga zvimwe nezve avo vari pano). Iwo maratidziro emitsetse anopa ruzivo rwakatsetseka, tactile inopa yakawanda mhinduro paunenge uchitsvaga mhedzisiro mune yechinyakare mehendibhodhi keyboard kurira.
Imwe yesarudzo idzi inosanganisira ipfupi actuation points uye mwenje actuation simba inoita kuti iyo keyboard ive nifty sezvazviri chaizvo. Kufanana nekhibhodi pachayo, iyo keycaps yakatetepa uye yakaderera chimiro, zvichikonzera mune rakasiyana kwazvo typing ruzivo kubva kune zvakajairwa. Asi imwe inogadzikana uye inogutsa.
Isu takanyadziswa nekuona kuti iyi keyboard haiuyi nezororo rewrist, asi yayo yepasi dhizaini dhizaini uye kiyi switch switch inoita kuti zvive zvinoshamisa kugutsa kushandisa, zvese zvemitambo uye zvezuva nezuva typing. Iwo akadhinda kiyi switch haanyanye kurira futi. Saka kwete chete iyo G915 TKL iri nyore-pa-ziso, zvakare zvakareruka-pane-nzeve zvakare.
Zvekutamba, isu takawana iyo G915 TKL kuti ive yechokwadi uye inoteerera, ingave wired kana isina waya.
Mwenje inogadziriswa inosanganisira yakawanda-yekuvhenekesa mwenje modhi
Yakazara RGB mwenje ine16.8 mamirioni sarudzo dzeruvara
Multiple mwenje modhi neLightsync kugadzirisa zvakare.
Sezvaungatarisira kubva kubhibhodhi yemitambo yeiyi premium, iyo G915 TKL zvakare ine kiyi yekuvhenekera. Iyi mwenje inogona kuvhurwa uye kudzimwa pane iyo keyboard pachayo, pamwe nekugadziridzwa mumatanho emwenje. Iyo zvakare inogadziriswa zvizere mukati Logitech's G-Hub software.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti kushandisa mwenje kunoita mutsauko kuhupenyu hwebhatiri, asi kunyangwe iine yakavhurwa iwe unogona achiri kuwana yakawanda semaawa makumi mana ehupenyu hwebhatiri mune isina waya modhi. Tichacherekedza hazvo kuti nazvo zvadzimwa zvakati omei kuona kiyi yekunyora, saka inogona kunge iri nyaya kana usiri wekubata typist.
Mukati meG-Hub iwe unogona kusarudza kubva kune akasiyana emwenje mhedzisiro uye snazzy RGB mifananidzo kana iwe unogona kupenda yega makiyi uye kugadzirisa yako RGB ruzivo. Iyi ndiyo Lightsync inokwanisa kureva kuti iwe unogona kuyananisa neimwe Logitech giya futi.
Iyo Logitech G915 TKL haina kupokana kupenya munzira dzinoverengeka. Kazhinji, isu hatisi vateveri vakuru ve tenkeyless dhizaini. Chokwadi iwo macompact uye anotakurika asi ivo vanowanzo kupira usability mukufarira iwo maficha, iyi keyboard haina mhosva nazvo. Yakagwinya, yakanaka uye mufaro kushandisa.
Kana iwe uine shoma nzvimbo padhesiki rako kana uchida chimwe chinhu chiri nyore kutora uchitenderedza newe, uku uchiri zvakare kuiswa-kwakarongedzwa, saka izvi zvinogona kunge zviri izvo. Pfungwa dzakakwirira dzinenge idzo dhizaini dhizaini, kiyi inogutsa kiyi actuation uye hupenyu hweupenga hwebhatiri. Downsides ndiwo mutengo wemutengo, iyo inogona kutetepa kiyi dhizaini uye kushomeka kweUSB-C kubatana.
Yakanakisa ficha-yakazara RGB keyboard
Ndege Giredhi Aluminium Alloy Furemu
Cable manejimendi maficha
Simba Pamwe Nekiyi RGB Kujekesa
Magnetic Wrist Zororo
Kana zvasvika pakutamba kiyibhodhi, vamwe vagadziri vanoenda kunze vese voisa maaboards avo nezvose zvaunogona kuda. Vamwe vanowedzera muzvinhu zvawaisatomboziva kuti waida kusvikira watanga kutamba navo. Ndo zvakaitwa neSimbiSeries neApex Pro. Iyi keyboard haina chete ine chaiyo inotyisa RGB mwenje, maitiro uye yekubatanidza sarudzo neakasiyana maapplication uye yakanaka yakasimba dhizaini asi zvakare ine zvimwe zvinonakidza maficha. Imwe yacho inogadziriswa manhamba ekugadzirisa, saka unogona kusarudza kuti makiyi anopindura sei pakubata kwako uye wozviita pane yakakosha-ne-kiyi hwaro zvakare.
Kunze kwemakadhibhodi ese atakaedza, chinhu chekutanga chinomira pamusoro peSimbiSeries Apex Pro ndeyekuvaka mhando. SteelSeries haina kunyatso kukakavara pane dhizaini apa. Iyo yakavakwa neepamusoro-mhando nendege-giredhi aluminium furemu iyo inoita kuti iite pakarepo inzwe iri pamusoro kune vamwe vapurasitiki.
Iyi keyboard inozobatanidza o PC yako yekutamba nekaviri USB yekubatanidza iyo inoita kuti mese musimbise magetsi uye inonyatso kushandisa USB passthrough port kumberi. Kune akachenesa freaks pakati pedu, kuwedzerwa kweye tambo manejimendi mune fomu yeiyo nzira grooves pazasi pekhibhodi chinhu chinogamuchirwa chimiro zvakare.
Zvakare pamwe neyakaomeswa furemu, iyo SteelSeries Apex Pro ine mamwe akanyatsogadzikana keycaps uye "yakapfava kubata" yerabha rakapetwa remawrist zororo iro rinogona kubvarurwa nyore nyore uye kubviswa pasina kukakavara kwakawanda.
Chimwe chinonakidza chinoratidzira dhizaini yekhibhodi iyi kuiswa kweOLED Smart Ratidza kumusoro kurudyi. Izvi zvinogona kushandiswa kumarudzi ese ezvinhu sekukuzivisa iwe rwiyo rwuri kutamba paSpotify, ndiani arikutaura muDiscord kana kungo ratidza yako tsika logo kana mifananidzo yemifananidzo. Hazvisi nyore kuona pakati pechikamu chemitambo nekuda kwekuiswa kwayo kuseri kweiyo numpad, asi yakanaka yekuwedzera yekuwedzera iyo inonakidza kutamba uchitenderedza nayo.
Kumusoro uko iwe unozotarisawo rakanyatsogadzirwa vhoriyamu vhiri uye bhatani rimwe rinoita seyakawanda-inoshanda midhiya kiyi. Muchina mumwe chete ucharidza odhiyo, pombi-mbiri yekusvetuka, katatu tap yekudzosera kumashure. Izvi zvinochengetedza iyo keyboard yakanaka uye yakashambidzika asi ichiri kushanda.
Imwe, yakawanda-yekuita multimedia kiyi
OmniPoint Adjustable Mechanical switch (Analog Horo Mhedzisiro Magnetic Sensor)
Actuation Point 0.4mm kusvika 3.6mm, 45cN simba, 0.7ms nguva yekupindura
104 n-kiyi rollover ine 100% anti-mweya
Iko kusimbisa kukuru uye kudhirowa kukuru kweiyi keyboard kunogona kunge kuri iko switch. Aya ndiwo maOmniPoint Adjustable Mechanical Switches ayo anonzi maSimbiSeries anoita iyo Apex Pro "yepasirese michina yekutamba mitambo". Shanduko idzi dzakatarisana nepakati pechikamu chikuru chekhibhodi (kwete iyo numpad nezvimwewo) uye zvinokutendera iwe kugadzirisa mwero wekusimbisa pane yakakosha-ne-kiyi hwaro mukati me SteelSeries Injini software.
Izvi zvinorevei mukuita iwe unogona kuzviisa kuti zviitwe kunyangwe nekubata kweminhenga. Unogona kuzviita zvakanyatsoita makiyi kuita kungori bhurasho mwenje. Ivo havachafaniri kuve vakaora mwoyo zvizere asi vanogona kungoitwa zvinokwezva kushushikana. Iwe haugone chete kuita izvi pamakiyi akasiyana, kumisikidza akasiyana actuation mazinga kune imwe neimwe, asi zvakare kumisikidza akasiyana profiles emamiriro akasiyana. Iwe unogona kusarudza kubaya uye kuzara kushushikana kana uchinyora mukati Windows, uchiri kuda sitiroko yakajeka yekutamba kana zvimwewo. Sarudzo ndeyako. Chinhu chisingawanzo kuwanikwa kuwana chakanakisa chenyika mbiri nekhibhodi imwe chete.
Aya makiyi zvakare anoita kunge ane hupenyu hwese anosvika kumamirioni zana ezvibhakera zvakare, iri zvakapetwa paavhareji yemamwe akawanda makirabhu.
Mamirioni zana keystroke vimbiso
MaGamers vanoziva kuti mabhatani akakosha mukuhwina uye kana zvasvika kune emuchadenga makhibhodi, pane zvakawanda zvakakosha zvinhu zvinoita mutsauko.
Iyo SteelSeries Apex Pro ine 104 n-kiyi rollover iine zana muzana anti-yekufema tekinoroji. Izvi zvinoreva kuti mabhatani ekiyi akarurama uye ako ese anodhindisa anoteedzerwa sezvaanofanirwa kuve, kunyangwe iwe uchikaka kuwanda kwemakiyi kamwechete.
Beyond actuation mazinga uye kurongeka, takawanawo iyo SteelSeries Apex Pro kuve yakasununguka uye inonakidza kushandisa zvese panguva yemitambo zvikamu uye mukati mezuva rekushanda futi. Maekisheni anogutsa uye akasununguka uye hatina kumbove nenyaya kana tichisanganisa makiyi akawanda pakati pemutambo unomhanya-mhanya.
Iyo SteelSeries Injini zvakare inokutendera iwe kuronga makiyi munzira dzese dzese - kunyangwe kumisikidza uye kurekodha macros chero kiyi pane iyo keyboard. Iwe unogona kuseta mabhatani ekumisikidza macro, reprogramu izvo zvavanoita, wozvimisikidza kuti vatange chaiwo mapurogiramu uye nezvimwe.
Multiple presets inowanikwa
Sezvaungatarisira kubva kune yepamusoro-yekupedzisira mitambo yekutamba, ino izere neakasiyana masisitimu mukati me software yekugadzirisa mwenje wayo. Iwe unogona kugadzirisa backlighting kune chaiwo makiyi (eg W, A, S, D) kana iyo yakazara keyboard. Kune zvakare huremu hwemwenje mhedzisiro iyo inosanganisira iwo chete mavara, colourshift, gradient, kufema uye izere yekhibhodi preset.
Isu tinoda sarudzo dzemaitiro ekuvhenekesa pane iyo SteelSeries Apex Pro sezvo iwe usingakwanise chete kuseta madhesiki madiki asiwo mhedzisiro mhedzisiro pamusoro pawo. Saka iwe unogona, semuenzaniso, kuve neyemhando-mavara kiyibhodhi seyakajairika iyo inopindura nemhando dzakasiyana mafungu sezvaunonyora.
Iyi ndeimwe yeakanakisa uye akajairika kugadzirisa RGB mwenje yatakaona pane yemitambo keyboard uye inoita iyo Apex Pro kunyanyisa kutaridzika mupfungwa dzedu. Wedzera kune izvo izvo kugona kwekuti maapplication adzore mwenje uye zvinhu zvinyanye kutonyanya kunakidza. Unogona kuseta Kurwisana, semuenzaniso, kushandura ruvara rweimwe kiyi kana vanhu chaivo mugero vari kutaura.
Iwe unogona zvakare kumisikidza mwenje kuti uchinje kana iwe uri AFK uye kunyangwe kudzima kana kungodzima kana iwe usiri kuishandisa. Kwete chimwe chinhu chatakaona kumwe kunhu.
Iyo SteelSeries Apex Pro isarudzo yakanakisa kana iwe uchitsvaga yepamusoro-yekupedzisira mitambo yekutamba. Inogona kunge iri tad inodhura kune vamwe, asi iwe uri kuwana izvo zvaunobhadhara pano. Hunhu hwekugadzirwa uye kuvaka hazvirambike.
Iko kugona kwekugadzirisa iko iko kuita, kuvhenekesa uye kunyangwe kiyi yekumisikidza pane yakakosha-ne-kiyi hwaro inoita kuti iyi ive yakasarudzika keyboard. Inoteerera, yakangwara, yakasununguka uye yakawanda inonakidza kushandisa.
Takamanikidzwa kuwana zvinhu zvatisingade nezve iyi keyboard yemitambo uye ingangoita imwe yezvatinoda.
Yakanakisa chinyararire yemitambo keyboard
Fnatic Rush michina keyboard
Cherry Tsvuku MX Chinyararire makiyi
Rubberised inowoneka ruoko rwekuzorora
Kana iwe uchitevera mechina kirabhu yekururamisa uye mhando inouya neiyi dhizaini, asi ukaiswa kure nekurira kukuru mabhatani anowanzo kuve anosangana navo, ipapo "yakanyarara" mechina keyboard inogona kunge iri sarudzo yakanakisa.
Iyo Fnatic Rush yemakaniki keyboard inoshandisa Cherry Red MX Silent makiyi - zvinoreva kuti ma keytrokes akasununguka, akanyarara uye akarurama futi. "Chinyararire" chingave chiri kutsausa pano hazvo, sezvo kuchine ruzha, asi panguva yekuyedzwa takawana makiyi aya akanyarara kupfuura mamwe mamakebhobhodhi ataedza.
Iyo Fnatic Rush ine inonakidza keyboard dhizaini iyo inomira kunze kubva muboka revanhu, kuve yakapusa asi yakagadzikana uye inoshanda. Makiyi uye pamusoro pekhibhodi zvine manzwiro erabha kwavari izvo zvisina kujairika sekusununguka. Irabhu inokwenenzverwa yerabha yakavharwa zororo ndeyekuwedzera kwekugashira iyo inowedzera nyaradzo pakushandiswa kwemazuva ese.
Dhizaini yeiyi haina ruzha uye inodada semamwe makhibhodi - hapana mabhatani asina basa kana mabhero uye muridzo, asi Fnatic yakaratidza kuti ichi hachisi chinhu chakaipa.
Dhizaini yeiyo Fnatic Rush kiibhodhi inosanganisirawo maviri ekuwedzera USB madoko kumashure kwepaki yakareruka uye tamba nemamwe majaira - kuchaja foni, semuenzaniso.
Rubberised pamusoro uye ruoko rwekuzorora
Zvirongwa zvishanu zveprofile zvinosvika gumi macros pama 10 keystrokes pa macro
Mamirioni makumi mashanu sitiroko dzinovimbiswa
Kunyangwe paine yakajeka dhizaini dhizaini, iyo Fnatic Rush iri chaizvo inokwanisa kwazvo. Izvi zvinosanganisira kugona kurekodha mabhatani emacros ane mavara anosvika makumi maviri nematanhatu pakurekodha. Izvi zvinogona kumisikidzwa mumatanho mashanu eprofita. Imwe neimwe inogona kubata kusvika gumi macros uye aya macros anogona kupihwa kune chero kiyi pane iyo keyboard ichiita kuti ive inoshanduka uye nyore nyore kugadzirisa.
Kune makiyi ekushanda zvakare ayo anosanganisira multimedia mabhatani evhoriyamu, skip, kutamba / kumbomira. Aya mabhatani anoda maviri makiyi ekutsikirira kunyangwe - FN + F1-F6 - kusiyana nemamwe makhibhodi ane akapatsanuka uye ari nyore kushandisa mabhatani.
Iyo Fnatic Rush yakavakirwa yemhando yepamusoro, yakagadzirirwa eSports uye nekudaro inogadzirwa kuti ive yakasimba zvakakwana kubata zvifambiso kuenda kumitambo pamwe nekushandisa nguva dzose uye kushungurudzwa. Makiyi ari pachena anovimbiswa makumi mashanu emamiriyoni ekurohwa, asi ungaratidza sei kuti waita zvishoma isu hatina chokwadi. Izvo zvinoita, zvakadaro, kuvimba kwaFnatic muchigadzirwa uye kuvimba kwaunogona kuisa mukutenga kwako.
Tsvuku backlit makiyi
On / off uye pulsing modes
Iyo Fnatic Rush haisi RGB keyboard asi yakadzoserwa neyakajeka tsvuku hue. Zvirongedzo pano zvakasarudzika zvakanyanya sezvo uchikwanisa chete kuita matatu marongedzero emwenje - kuvhenekwa, kudzimwa kana kupurindwa. Kana kupenya kwemavara ndiko kwaunoteedzera kubva kune yako yekutamba keyboard, izvi zvinogona kukuisa iwe kure. Isu takawana kuvhenekera kuve kunonakidza uye nyore nyore kushandisa asi.
Iyo Fnatic Rush inoshamisa inokwanisa uye inonakidza khibhodi yekushandisa, zvese panguva yemitambo mitambo uye yekushandisa kwemazuva ese. Pakatenderedza £ 70, zvakakodzera kuti utarise kana iwe uchida kurongeka kweyemagetsi keyboard asi uine makiyi akanyarara uye dhizaini yakadzikisira zvishoma isingatarise kunze kwenzvimbo padhesiki rehofisi.
Iyo yerubberized pamusoro, yakakura hombodo yekuzorora uye yakasununguka kiyi yekukosha inoita iyi keyboard mufaro wekushanda nayo. Tinoda kuona mavara eW, A, S, D makiyi uye pamwe mamwe makiyi enhau akapatsanurwa kutema mabhatani asi zvese mune zvese chikamu chinoshamisira.
Yakanakisa yemitambo keyboard yezuva nezuva typing
Mechiniki yemitambo makhibhodi akakosha pakutamba, asi kazhinji inoshayikwa mukuchinjika ichivaita chiitiko chisinganyaradze kwekushandisa kwezuva nezuva. Kuwedzererwa kwemamwe makiyi, zvigadzirwa zvequirky kana ruzha rwakakomba kiyi inogona kuve-kuisa. Mamwe magadzirirwo, kunyangwe akajeka kutarisa, anowanzo kushayikwa munyaradzo unoguma nekurwadziwa kwekushandisa kwezuva nezuva.
Kingston's HyperX Alloy Elite inokanda mabhokisi ese kuendesa nyaradzo uye kushandisika pamitambo nekutayipa, zvichikonzera yakanaka keyboard, chero zvauri kuita.
Heavy-basa rakasimba simbi dhizaini
Simplistic dhizaini isingade imwe yekuwedzera software
Iyo HyperX Alloy Elite inozvirumbidza inorema-basa, yakasimba uye inorema-kurema dhizaini uchishandisa yakasimba simbi furemu. Isu takawana iyo keyboard haina kufamba-famba padhesiki uye yaive neyakajeka yakasimba dhizaini kune iyo iyo inogona kumira maawa ekushandisa uye kushungurudzwa. Pamusoro pekhibhodi inosanganisirawo imwe yekuwedzera USB 2.0 yekupfuura-kuburikidza nekuisa kweanoperera (senge mbeva).
Iyo tambo yakarukwa tambo inobvumira kubaya mumuchina wako wekutamba uye inovimbisa kuti hapana kukakavara kana kuramba nyaya nedesiki rako.
Kugadziridza kwekujekesa, mutambo wemitambo uye mabhatani ekupenya
Dzakatsaurirwa multimedia makiyi uye vhoriyamu vhiri
Kusiyana nemamwe makirabhu emitambo atakaedza, iyo HyperX Alloy Elite haishandisi software, saka haufanire kunetseka nezve kurodha pasi zvimwe zvinhu kukombuta yako kana kushandisa nguva kumisikidza ma profiles. Izvi zvinotaura kune yakapusa dhizaini yekhibhodi.
Iyo HyperX Alloy Elite inosanganisira yakatsaurwa multimedia makiyi uye vhoriyamu vhiri. Iyo zvakare inosanganisira makiyi ekuvhenekera switching, mutambo modhi uye kupenya bhatani. Iko hakuna macro makiyi pano, saka kana ichi chiri chinhu chaunoda kubva kune ino yekutamba keyboard ipapo iyi haisi yako. Isu takawana mamwe makiyi akakwana zvakakwana kushandiswa kwezuva nezuva. Kunyangwe uchiisa pasocial media, uchitamba mitambo kana kunyora zvinyorwa, iyo HyperX Alloy Elite inozviita zvese nyore.
Anochinjika akanyorwa mavara eW, A, S, D uye 1,2,3,4
Inowanikwa neCherry MX Bhuruu, Bhurauni, kana Tsvuku kiyi switch
Yakakura inobviswa ruoko rwekuzorora neakagadzirwa pamusoro
Iyo HyperX Alloy Elite ndeye michina keyboard ine yakapfava-yekubata makiyi. Inowanikwa neCherry MX Bhuruu, Bhuruu kana Tsvuku kiyi switch, saka unogona sarudza iyo chaiyo setup yezvido zvako. Isu takaedza iyi keyboard ne Cherry MX Red switch uye takawana makiyi ekutsikirira kuti anyarare kupfuura mamwe emagetsi emabhodhi atakaedza. Shanduko idzi dzinoonekwa zvakare kutsetseka uye kugadzikana pakunyora kwemazuva ese.
Isu takawana iyi iri inonakidza kushandisa kwezuva nezuva typing - inotsvedzerera, yakasununguka uye iri nyore kushandisa pasina kuverengera maererano neakanyanya makiyi ekudhindisa.
Inosanganisirwa mubhokisi iri titanium-yakajeka mavara akadhirowewa eiyo W, A, S, D uye 1,2,3,4 makiyi. Iko kuumbwa kushoma uye kutsvedza kune iyo W, A, S, D makiyi ayo anoita kuti zvive nyore kuziva mukati mekupisa kwehondo dzemitambo.
Isu takadawo zororo rakakura remaoko rinodzikika neapfava-yekubata, iyo yakaratidza kugadzikana kukuru mukati mekushandisa kwemazuva ese uye inobatsira kudzikisira kuneta kwemaoko panguva yemitambo yakareba zvakare.
Isu takawana iyo HyperX Alloy Elite kuve imwe yeakanyanya kusununguka makibhobhodhi ekushandisa kune akasiyana mabasa uye akada zvidiki zvidiki kune izvo dhizaini yakaita mutsauko mukuru. Imwezve yakapusa yekuwedzera, iyo yemitambo mode bhatani - inoremadza iyo inonetsa Windows kiyi kana uchitamba mitambo, chinova chinhu chinobatsira kuve nacho zvechokwadi.
Kuvhenekera kuchinja pane-iyo-nhunzi
Zvirongwa zvishanu zvemwenje zvinosanganisira Solid, Kufema, Trigger, Kuputika, Wave, uye Tsika
Iyo HyperX Alloy Elite haisi yese-kuimba, yese-kutamba maererano nemwenje. Iyi keyboard yakavhenekerwa, asi chete nemwenje mutsvuku. Pasina software yekuwedzera, zviri nyore kufunga kuti iyo HyperX Alloy Elite haina kugona semamwe makhibhodi pane ino runyorwa, asi inoshanda zvinoshamisa.
Kuchinja kwekujekesa kunoitwa kuburikidza nekiyi kiyi kumusoro kuruboshwe kwekhibhodi. Iwe unogona kushandisa iro bhatani kuti uchinje pakati pevashoma vemashure modhi modhi anosanganisira Solid, Kufema, Trigger, Kuputika, Wave uye tsika.
Iwo W, A, S, D makiyi anovhenekerwa nekusarudzika pane tsika, asi iwe unogona kusarudza makiyi ekuvhenekera mune ino modhi nekudzvanya uye kubata kupenya uye mutambo mode kiyi pamwe chete, wobva uchingodzvanya mabhatani iwe aunoda kuratidza nekusimbisa kupenya. uye mutambo modhi makiyi zvakare kana wapedza. Izvi zvinokutendera iwe kugadzirisa mwenje yemakiyi chaiwo kuti usangane nezvinodikanwa zvako usingatore kurodha chero software yekuwedzera.
Iyo HyperX Alloy Elite inonakidza kune yayo £ 120 yekuvhara mari. Inosanganisira sarudzo dzekugadzirisa kuti dziite dzako chaidzo nesarudzo yemaswitch, akanyorwa W, A, S, D makiyi uye akasiyana marongero ekujekesa. Kunyanya kutikwezva isu asi hwaive hunhu uye kunyaradzwa kwedhizaini iyo yakanga isingaenzaniswi nevazhinji vevamwe vatakaedza, kunyanya panguva ino yemutengo. Kunyangwe iyo isina zvese maficha uye mabhero uye muridzo wemamwe emamwe makadhibhokisi pane ino runyorwa, iyo HyperX Alloy Elite ichiri sarudzo yedu yakanakisa yekutaipa kwemazuva ese uye nyaradzo. Izvo zvainoshayikwa mumacro makiyi uye RGB ichivhenekera kupfuura kungogadzirira neakanaka maekiseti, kuneta kunoderedza zororo rewrist uye dhizaini dhizaini.
Yakanakisa splashproof kiibhodhi ye clumsy vatambi
Corsair K68 yemitambo keyboard
Cherry MX kiyi switch
100 muzana Anti-Ghosting
Kana iwe uri mhando yemutambi anofarira kunwa uye kunwa iwe uchitamba, saka hapana mubvunzo kuti unonetsekana nezve zvinogona kuitika kana ukagogodza chinwiwa chako pane yako inodhura yemitambo kiibhodhi. Ndiani anoda kushandisa mari pane kutsiva kiibhodhi, nemari iyo ingangoshandiswa zviri nani kuvaka yako Steam muunganidzwa.
Pamwe panouya mhinduro kumatambudziko ako ese muchimiro cheIP32-yakatarwa mutambo wekutamba uyo wakavakirwa kuti udzivirire kupera uye nenjodzi dzekudya dzakashata.
IP32 guruva uye spill kuramba
Pfungwa yeCorsair K68 iri nyore zvakakwana. Kunze, ndiyo yako yakajairika mehendi yekutamba khibhodi ine dhizaini inoyevedza. Haisi yakanakisa kana yepamusoro-magadzirirwo pane edu runyorwa, asi yakavakwa zvakachena uye yakarongedzwa izere nezvimiro zvakadaro. Iyo Corsair K68 yakavakirwa kwazvo pane hwaro hwepurasitiki, asi izvo hazvireve kuti haisi keyboard yakasimba yakagadzirirwa.
Pasi, ndipo panonyatso kupenya ichi keyboard. Imwe neimwe keywitch inochengetedzwa yega yega neakakwidziridzwa dzimba dzerabha iyo inochengeta mvura kunze. Kunyangwe iwe usingakwanise kunyudza iyo keyboard mumvura, zviri pachena kuti dzimba idzi dzaizodzivirira mashandiro emukati kubva mukuparara uye kuputika.
Kana iwe uchinetseka kuti dhizaini iyi inokanganisa mashandisiro ezuva nezuva ezve keyboard, tinofara kuzivisa kuti haina. Muchokwadi, kunze kwekunge wabvisa makiyi ekuti utarise haungatomboona mutsauko.
Kujekesa kupenya kiyi
Windows kiyi regedza bhatani
Iyo Corsair K68 haina mamwe emamwe macro mabhatani kana makiyi emamwe makhibhodi, asi inosanganisira multimedia makiyi ekudzora mimhanzi kutamba, kugadziridza vhoriyamu uye zvimwe pane-iyo-kubhururuka.
Iyi keyboard inoenderanawo ne Corsair's iCUE software ichikubvumidza iwe tweak uye wochironga kune chako chaunoda. Saka kunyangwe pasina makiyi macro akazvitsaurira, iwe unokwanisa kuronga uye kurekodha macros kune chero kiyi pane iyo keyboard uye nekumisikidza chaiwo profiles ekuchinja pakati zvakare.
Pane bhatani rinopenya rekugadzirisa mwenje zviri nyore uye bhatani rekuremadza iyo windows key kuti urege kuikanganisa netsaona uchitamba mutambo uye nekukanganisa mafaro ako.
Inosvikika ruoko rwekuzorora neunyoro-kubata kupera
Nyaradzo keypress dhizaini
Iyo Corsair K68 inopa zvinoshamisa kushamisika uye nerufaro ruzivo mune zvese mukutamba uye panguva yekushandisa kwemazuva ese. Iko hakuna kubvumirana pane kunyaradzwa kana mhando pano uye iyo IP32 dzimba inoita hapana unooneka mutsauko kumhinduro yekiyi.
Isu takawana mabhatani ekhibhodi iyi kuve anoshamisika akaiswa pasi vachiri kuchengetedza mhinduro yakajeka iwe yaunogona kungotarisira kubva kune yemuchina keyboard. Iwo maCherry MX makiyi ekushongedza akanyatsojeka, akasununguka uye anokwanisa.
Iyo K68 inouyawo neinozorora wrist zororo ine yakarongedzwa "yakapfava-kubata" kupera. Kunyangwe zororo iri reruoko riri repurasitiki uye risinganyanyo fadza sevamwe vari pane ino runyorwa, zvakare zvinoshamisa kugadzikana. Mhedzisiro mhedzisiro ikhibhodi yakagadzirwa-zvakanaka, ndiko kunakidzwa kushandisa, chero zvauri kuita.
Dynamic RGB kudzosera kumashure
Inopindirana neCORSAIR iCUE software
Iyo K68 keyboard kuenderana ne Corsair's iCUE software zvinoreva kuti iwe unokwanisa kuwana akasiyana siyana marongero emwenje uye sarudzo dzekugadzirisa.
Izvi zvekugadzira mwenje zvinosanganisira kupinda kune pre-yakatsanangurwa modhi yekuvhenekesa nezvose kubva panguva yakatarwa, yakatarwa mwenje kune mwenje inopindura yako typing. Chiedza chetsika zvakare chinogadzirisika, saka unogona kunyange tweak mavara ekiyi yega yega. Kana iwe uine akawanda maCorsair zvigadzirwa zvino unogona kushandisa "chiriporipo mwenje" uye "mwenje chinongedzo" sarudzo kumisikidza rimwe vara pazvinhu zvese zvishandiso kana kuwiriranisa mwenje kune kwako kufarira.
Kupenya kwematanho kunogona kugadziriswa zviri nyore pane iyo keyboard, kudzimwa zvachose kana kubviswa mukati me software. Isu tinofara kutaura kuti dzimba dzinopenya hadzisi kukanganisa mwenje mhedzisiro. Iyi keyboard inovhenekera zvakanaka pasina kukurira.
Iyo Corsair K68 ikhibhodi yakanaka kwazvo iyo inogona kunge ichidhura kupfuura mamwe akawanda emamaki keyboards awakatarisa paunenge uchitsigirwa ne-splash-proofing iyo inokuita kuti unzwe kushoma pamucheto iwe uchidya, uchinwa uye mutambo.
Iyi keyboard yakanakira bhoyy mutambo wekutamba kana chete wevamhanyi vemitambo avo vanowanzo gogodza pamusoro pezvinwiwa kana kuita bongozozo pavanenge vachitamba. Pasina kukanganisa pane dhizaini mhando, iyo K68 isimba rinofanira kuverengerwa pamwe uye mufaro wakazara kushandisa.
Kana bhajeti yako isingakwanise kutambanudza kune yakazara RGB vhezheni kana iwe usiri kunetsekana nezve yakazara-mwenje sarudzo, kune zvakare musiyano weK68 inowanikwa nekungotsvuka kutsva kwemwenje kwemari shoma.
Yakanakisa membrane chimiro chemitambo kiibhodhi
Inonyaradza uye yakanyarara kiyi dhizaini
Chinhu-chakapfuma mutambo wekutamba
Ruzhinji rwevatambi vari kutsvaga meyiki kiibhodhi pavanotenga zvigadzirwa zvemitambo nyowani, asi havazi vese munhu anofarira echimakanika dhizaini. Iwe unogona kunge uri mumwe wevanhu ivavo vanosarudza runyararo uye nyaradzo ye membrane membrane asi unoodzwa nekushaikwa kwesarudzo dziripo kunze uko. Membrane keyboards kazhinji haimire kune avo vanokwikwidza makwikwi maererano nesitayera, maficha, kuchinjika uye mashandiro.
Kana izvi zvichinzwika sedambudziko rawakatarisana naro, saka pane nhau dzakanaka muchimiro cheRoccat Horde AIMO - khibhodi nyowani kubva kuRoccat ine membrane dhizaini dhizaina munyika inotongwa nema mechanical keyboards. Iyi keyboard yekutamba inopa imwe inonakidza imwe nzira kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chakapfuma-uye chinoshanda pamwe nekuteedzera kwemazuva ese sezvazvinoita pakutamba.
Zororo rakakura rinosununguka rewrist
1.8m rakarukwa USB tambo
Iyo Roccat Horde AIMO ndeye inodhura khibhodi kupfuura akawanda emamwe madhijitari pane urwu runyorwa. Mhedzisiro yacho khibhodi iyo iri yepurasitiki zvakanyanya uye inogona kutaridzika kunge yakachipa uye inofara pakuona kwekutanga asi yakanyatsovakwa-naka nekutarisisa kwakajeka pahunhu. Iyi keyboard ine zororo hombe uye rakasununguka remaoko iro rinowanikwawo uye rinogona kugadziridzwa kune zvaunoda. Kufanana neyese yakasara iyo keyboard, ipurasitiki asi inokodzera zvakanaka pachiuno uye inovimbisa nhanho yakanaka yekunyaradza chero iwe zvauri kuita.
Iko kune refu yakarukwa USB tambo uye iyo inosimbisa mhando yeiyo dhizaini zvakare. Kungoti nekuti iyi haisi yemichina keyboard haireve kuti inofanirwa kudzingwa senge yakachipa uye yakaderera mhando. Makiyi ane actuation yakasununguka uye inonakidza mhinduro iyo yakatishamisa isu panguva yekushandisa, kunyangwe kana ichienzaniswa neepamusoro-magumo emagetsi mamaki.
Tuning vhiri uye nyore-kuwana multimedia makiyi
Customizable macros uye makiyi mabasa
Multiple memory memory
Nyore kusuduruka kiyi nokuchinja
Sezvaungatarisira kubva kukhibhodi yemitambo, iyo Roccat Horde AIMO yakazara nezvinhu uye nekukosha mashandiro. Rutivi rworuboshwe rwebhodhi rinosanganisira mashanu akadzika-macro makiyi anogona kugadzirirwa nyore nyore kune kwako kufarira mukati me Roccat Swarm software. Kumusoro kurudyi kunotungamirwa ne-nyore-kuwana multimedia uye makiyi ekushanda. Izvi zvinokutendera iwe kuti uite icho chakajairwa chinhu sekutamba, kumbomira, kusvetuka uye kudzoreredza mimhanzi pamwe nekugadzirisa vhoriyamu, asi zvakare bvumira iko kuri nyore tweaking yemwenje, kupenya, mavara uye nezvimwe.
Iyo vhiri rekugadzirisa rinobvumira kukurumidza uye nyore kugadziridza kwemasisitimu pane-iyo-kubhururuka futi. Sekutadza, inodzora vhoriyamu vhoriyamu asi nekudzvanya kwemamwe mabhatani emabasa, inoshanduka pakati pezvirongero zvichikubvumidza kugadzirisa kupenya, ruvara, dpi marongero uye nezvimwe. Isu takanyanya kufarira kuti iwe unogona kuishandisa kuchinja pakati windows in Windows 10 zvakare.
Imwe yezvakakurumbira zveiyi keyboard ndeye kubatanidzwa kweRoccat's Easy-Shift mashandiro. Isu takaona izvi muRoccat Vulcan 120 uye mufaro chaiwo - kugona kuumbazve chero kiyi pane iyo keyboard mune dzakawanda nzira dzekuchinja kiyi modhi pane-iyo-nhunzi.
Kana iwe uchishuvira, iwe unogona zvakare kudzoreredza basa rekutanga remumwe makiyi kune imwe bhatani kana kumisikidza futi. Sezvo huwandu hwemapurogiramu akarongwa aripo mukati me software, izvi zvinoreva kuti iwe unogona kuronga zvirongwa zvakasiyana zvezviitiko zvakasiyana - kumwe kumisikidzwa kwemitambo uye kumwe kunyora nekusefa. Isu tinogona zvakare kufungidzira anonakidza antics ane reprogramming makiyi ekupa zvakazara zvisiri izvo zvekuisa uye kuvhiringidza chero mumwe munhu angangoshandisa iyo keyboard iwe uri kure nazvo.
"Membranical" kiyi dhizaini
Kurumidza-moto yakaderera-chimiro macro makiyi
Iyo Roccat Horde AIMO yakagadzirirwa kukodzera mune yakasarudzika chikamu chekirabhu kumwe kunhu pakati petsika kiyibhobhodhi uye mekutamba mitambo mamaki. Kusvikira pane ino yakagadzirirwa neinonzi "Membranical" kiyi tekinoroji, iri pamusoro pechinyakare membrane membrane dhizaini kodhi maererano nemitambo yekutamba, asi yakanyarara uye yakasununguka kupfuura mechina khibhodi yekushandisa kwemazuva ese.
Iyi inzvimbo inonakidza yechibhodhi yemitambo, asi inoshanda zvinoshamisa. Iyo keyboard isinganzwisisike uye yakasarudzika keyboard inoshanda mushe mushe zvekutamba uye zvezuva nezuva zvekutapa mabasa. Yakanyarara uye yakapusa kushandisa, zvakanyanya seiyo Fnatic Rush, asi iine yakawanda yekutarisa pane membrane chimiro uye RGB kuvhenekera.
Iwo "Membranical" makiyi anopa epakati pekufamba actuation poindi iyo inoguma mune yakanyanya kujeka uye inoteerera keystroke ichienzaniswa neklassical keyboards. Iyo anti-chipoko tekinoroji inosimbisa kuti ese keypresses anonyoreswa uye hauna kumbobvira wasiya zvisina tariro uchimisikidza makiyi uye uchishamisika kuti nei asiri kushanda. Hapana chakaipisisa kupfuura kurasikirwa nemutambo nekuti iyo keyboard iwe yauri kushandisa iri kukuregedza iwe uye kwete kunyoresa zvako zvekupenga zvekushandisa.
Isu takashamisika nemabatirwo aiitwa iyi keyboard uye kugadzikana kwairi kushandisa. Isu tiri mafeni makuru eanogadzira mamaki emakhibhodi, asi iyi membrane yakashongedzwa chishandiso inzira yakajeka kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chakanyarara asi neakasiyana mashandiro uye kururamisa kwakaringana panguva imwe chete.
Multi-zone RGB kuvhenekera ine 16.8 mamirioni mavara
Multiple mwenje modhi inosanganisira yemavara wave, nyoka, yakazara yakavhenekera, kurova kwemoyo, kufema uye AIMO njere
Kunge ese akanaka emitambo mamaki, iyo Roccat Horde AIMO inoratidzira RGB mwenje iyo inogona kugadziridzwa kune yako yaunofarira. Mifungo yedu yekutanga patakatanga kushandisa iyo keyboard yaive yekuvhenekesa yakadzikira pane echimakanika mamaki ebhodhi ataona. Panguva yemasikati masikati, mavara emakiyi haanyatso kuoneka kunyangwe pakujeka kwakazara. Izvi zviri pasi pekugadzirwa kwekhibhodi zvakadaro.
Iyi keyboard inovakwa ne "chitsuwa dhizaini" dhizaini uko makiyi akanyatsopatsanurwa uye akanyatsopatsanurwa. Mhedzisiro yacho, kusiyana nema mechanical keyboards, iyo micheto uye pasi pemakiyi akaverengerwa mubhodhi pachayo. Izvi zvinoreva kuti hapana kubuda-kubuda ropa kubva kumicheto kana pasi pemakiyi uye mwenje unongoonekwa chete kuburikidza neraser-cutout yekunyora pamusoro pavo.
Husiku, iyi dhizaini yemwenje ingangove iri nyore pane ziso pane iyo dzimwe nguva inopenya mwenje inopenya iwe yaunozoona pane dzimwe nzira dzemuchina. Iko hakuna njodzi ye disco light show padhesiki rako inokanganisa kubva pamutambo wako wekutamba, asi kana mavara akajeka akakosha kwauri saka izvi zvinogona kunge zvisiri iyo keyboard yako.
Iyo yekuvhenekesa sisitimu pane iyo Roccat Horde AIMO inogadziriswa mukati meiyo Swarm software uye inobvumidza kuchinjika pakati penzira dzakasiyana siyana dzemwenje dzinosanganisira color wave, nyoka, yakazara yakazara, kurova kwemoyo, kufema uye AIMO akangwara. Yekupedzisira yeaya anowirirana nemamwe maRoccat zvigadzirwa kuitira kuti iwe uve nemufaro wekuenderana mwenje pane yako keyboard, mbeva uye headset kana iri yako mhando yechinhu.
Zvikasadaro, modhi dzemwenje dzinopa zvimwe zvakasiyana, asi zvirokwazvo hazvisi zvakawandisa senge meyikibhobhodhi erunyorwa urwu. Zvekujairira zvetsika, semuenzaniso, unogona kusarudza kiyi huru, yekufambisa kana kiyi dze numpad asi haugone kusarudza makiyi ega ega kuti uasumure mune mamwe mavara. Zvakadaro, zvakanaka kuti uone unoshanduka uye unogadzirisika RGB mwenje pane isingadhuri uye isiri-yemagetsi mitambo yemitambo.
Iyo Roccat Horde AIMO inomiririra sarudzo inonakidza kana iwe uchitsvaga iyo nyowani yekutamba keyboard. Izvo zvakachipa kupfuura akawanda emamwe sarudzo pane ino runyorwa, kunyanya epamusoro-magumo emagetsi mamaki, asi haina kukwenya pahunhu kana maficha semhedzisiro.
Kana iwe uchitsvaga meyibhodhi keyboard ine inoshamisa RGB mwenje sarudzo saka iyi haisi iyo yako keyboard. Asi kana iwe uchifara neyakavanzika nzira yekuvhenekera uye yakajeka keypress kubva kune yakanyarara uye yakagadzikana membrane chimiro pachinzvimbo, saka iyi sarudzo yakajeka. Pane inongori £ 80 / $ 89 iyo Roccat Horde AIMO isarudzo yakanakisa kune chero munhu anotsvaga yekutsemuka yemitambo kiibhodhi pamutengo unosvikika.
Yakanakisa kiibhodhi yesofa yemitambo
Dzimwe nguva yakati wandei pasofa yakavakirwa paPC yekutamba ndizvo zvakarairwa nachiremba. Iko hakuna chinhu chakangofanana nekutsvedza pamubhedha nemutambo wako waunofarira pamberi peTV hombe.
Ehezve, yega yega PC gamer yakakosha munyu wavo inoziva kuti iyo keyboard uye mbeva kumisikidza yakanakira chaiyo mitambo - kunyanya mumitambo yeFPS. Kutamba neyakajairika keyboard uye mbeva pasofa idambudziko. Kunze kwekunge iwe uchikwanisa kumwe kungwara kwehungwaru neunganidzwa wemakusheni uye yekucheka bhodhi, inogona kuve yakashata, isinganetsi uye isinganakidze nyaya. Ndipo panouya maLipboards.
4-mita USB tambo
Yakasarudzika mbeva uye mawoko nzvimbo
Yakavakwa-mu USB 2.0 passthrough
Iyo Roccat Sova yakakurisa-kupfuura-yakajairwa keyboard yakavakirwa nerunyararo uye inoshanda mupfungwa. Iyi yakajeka lapboard yemitambo iyo inobvumidza iwe kuti utore iko iko kweye keyboard uye mbeva kutamba kuimba yekutandarira. Nenzvimbo hombe yembeva yako uye compact kadhi dhizaini yakagadzirirwa kukwana zvakanaka pamakumbo ako, inoita senge yekupedzisira yepakati.
Pfungwa kune ino keyboard inosanganisira mana mahombe akapetwa tsoka anogara pasi pebhodhi uye anokwana zvakanaka pamakumbo ako iwe uchiridza. Takaona izvi zvichinyatsogadzikana mukati memitambo yekutamba, chero patanga takagara. Iyo zvakare ine ina-metre yakareba kuregedza USB tambo, iyo isu takawana yaive yakareba zvakakwana kutambanudza kuyambuka imba yekutandarira zviri nyore. Iko hakuna kudikanwa kwekugadzirisa zvakare imba kuitira kuti utambe mitambo nekiyi keyboard.
Nemaviri USB passthrough chiteshi aripowo, iwe une sarudzo dzekuvhara mamwe madhivha kubva kure zvakare. Batanidza mbeva yako uye kunyangwe yemusoro wekutamba kukhibhodi uye une zvese zvaunoda zvekutamba zvakagadzirirwa mune imwe swoop. Iyo inosanganisirwa mbeva bungee, yekumisikidza njanji uye tambo yekumisikidza zvinoreva kuti iwe unogona kuchengeta zvese zvakatsvinda uye zvakashambidzika futi.
Roccat inotaura kuti iyi keyboard inoratidzira risingaparare mhando yekuvaka uye yaitaridzika kunge yakasimba zvakakwana kwatiri panguva yekuyedzwa. Iyo ergonomic dhizaini yeiyi keyboard zvakare inoita kuti igare nyore kushandisa kwenguva refu yemitambo chikamu zvakare.
Roccat SWARM inoenderana
Multimedia uye hotkeys zvinosanganisirwa
Easy-Shift [+] maitiro ekugadzirisa
Kunge Roccat Horde AIMO, iyo Roccat Sova inoenderana neiyo Roccat SWARM app. Zvinoreva kuti inogadziriswazve uye inogadziriswa nenzira dzakasiyana. Iwe unogona kugadzirisa makiyi uye kugadzira macros mukati me software pamwe nekushandisa iyo Easy-Shift tech.
Kana izvo zvisina kukwana, iwe unogona zvakare kuzvibatanidza neako smartphone uye nekuchinja marongero nenzira iyoyo.
Iyo Roccat Sova inoratidzira yakafanana membrane dhizaini dhizaini yatakaona kubva kune mamwe maRoccat makhibhodi. Izvi zvinoita kuti igadzikane uye yakanyarara kushandisa - yakanaka yekutandarira yekutandarira uko vamwe vanhu vangave vachizorora uye vasingade kunzwa kubaya uye kurira kweyemagetsi keyboard.
Dhizaini yayo inoda kuti dhizaini yekhibhodi ive diki diki pane zvawajaira iwe. Dzimwe shanduko diki dzinoda zvishoma zvekugadzirisa kubva pane zvakajairwa - semuenzaniso, hapana musiyano pakati peF-makiyi kana yekunongedzera museve makiyi. Kushaikwa kwe numpad kunogona zvakare kuve kunonyorera kune vamwe.
Izvo zvakati, isu takawana iyi keyboard kuve inoshamisika kugadzikana uye nyore kushandisa kana iwe uchinge wawana hang yacho yacho. Kugadziridza kune iyo nyowani dhizaini hakutore nguva zvachose.
Imwe poindi yekucherechedza ndeyekuti isu takawana iyo mbeva-mbeva kuti ive inotsemuka uye padivi rine ruzha. Kana iwe uchida silky yakatsetseka yemitambo pamusoro, saka izvi zvinogona kunge zvisiri mhinduro kwayo. Nekudaro, ese ari maviri mawoko enzvimbo yekuzorora uye mbeva padhi zvinobviswa uye zvinogona kutsiviwa neyakagadzirwa-yakagadzirwa 3D yakadhindwa shanduro kana iwe uchinzwa kuda. Isu takawana nzvimbo dzacho dzakasununguka uye dzakaringana zvakakwana kune sofa yemitambo kunyange.
Iyo Roccat Sova inoratidzira yakasarudzika Roccat bhuruu backlighting inogadziriswa mumatanhatu akasiyana ekupenya mazinga. Kupfuura izvozvo, hapana hukuru hwekugadzirisa, asi hazvidi kudiwa zvakadaro. Iyi keyboard isinganyatsooneka, isina maturo uye yakangogadzirirwa kuita mushe.
Iyo ine yeboardboard memory iyo inokutendera iwe kuronga uye kuigadzirisa kune yako kufarira zvakadaro.
Iyo Roccat Sova ikhibhodi inoyevedza kune avo vari kutsvaga chimwe chinhu chakanakidzwa kushandisa mumba yekutandarira. Yakanyatsoiswa pasi ichienzaniswa nemamwe makirabhu pane ino runyorwa, asi haidi mabhero ese uye muridzo sezvo zvakagadzirirwa kuita basa rimwe uye rinozviita nemazvo. Isu takashamisika kungogadzikana uye nyore kushandisa iyi lapboard iri.
Iyo yakareba tambo yeUSB, yakapetwa pazasi yekusimudza uye yakasununguka mamaki kiyi inoita kuti iyi keyboard ive mufaro kushandisa mukamuri yekutandarira yakavakirwa mitambo yemitambo. Zvakakodzera kuti utarise kana ndiwo maratidziro ako.
Mamwe makhibhodi ekufunga nezvazvo
Linear Optical Chinja ine 40 G yekumisikidza simba
Razer Doubleshot PBT Makiyi
Yakadzika Pazasi Row Kurongeka
Inotsemurwa USB-C Yakarukwa Fiber Cable
Razer Synapse 3 inogoneswa, Chroma backlighting
N-kiyi roll-pamusoro neakavakirwa-mukati anti-mweya
Iyo Razer Huntsman Tournament Edhisheni inoyevedza zvishoma kit. Kune vatambi vakakomba, ino ndeye yepamusoro-yekupedzisira keyboard ine Razer's Linear Optical Swichi iyo inongoda iyo yakapusa kubata kuti iite. Shanduko idzi hadzisi dzekukurumidza chete, dzakaringana uye dzinogutsa kushandisa, dzakagadzirirwawo kuti dzigare - dzakavimbiswa kusvika pamamirioni zana ezvibodzwa!
Zvakakosha zveiyi tenkeyless keyboard zvakare inosanganisira inowoneka USB-C tambo, compact uye yakasimba dhizaini pamwe nezvose zvaunotarisira kubva kune yemitambo keyboard. Pane-iyo-kubhururuka macro kurekodha neakangoita maviri mabhatani ari nifty futi, sezvazvakaita neyakavanzika pe-kiyi RGB mwenje iyo iwe yaunogona kugadzirisa mukati Razer's Synapse software.
Yakakwira-mhando simbi furemu ine tambo manejimendi maficha
Ruvara / mwenje syncing nemamwe maAsus zvigadzirwa
Inosvikika numpad, multimedia makiyi, pane-iyo-inobhururuka macro kurekodha
Dzokorora kukwiridzira keypress basa
Cherry MX RGB switch, 100-muzana muzana anti-mweya mweya
Iyo Asus ROG Claymore isarudzo yakanakisa kana iwe uchitsvaga yepamusoro-yekupedzisira mitambo yekutamba. Inogona kunge iri tad inodhura kune vamwe, asi iwe uri kuwana izvo zvaunobhadhara pano. Hunhu hwekugadzirwa uye kuvaka pano hazvirambike.
Tinoda kuisirwa macro makiyi pasina kunyatso kuva nemakiyi epanyama pane iyo keyboard iyo inogona kuisa njodzi kuvhiringidza marongero awakajaira nekese kodhi QWERTY keyboard.
Iyo simbi furemu yakagadzirirwa zvakaomarara uye iyo inonakidza yakavezwa pamusoro inopa iyi keyboard kutarisisa kwakasarudzika. Isu takaiwana ichiita kunge iri guruva magineti hazvo. Zvimwe zvinoratidzwa zvinosanganisira detachable numpad iyo inogona kuiswa kune ese magumo ekhibhodi, inopindura Cheery MX switch uye inopedzisa. Ikhibhodi inotsemuka zvechokwadi.
SimbiSeries Apex M750
Kunyangwe isingakwanise kana kuita seyakafuma seimwe yemamwe makibobhodhi emitambo pane ino runyorwa, iyo SimbiSeries Apex M750 zvakakodzera kufunga kana kuvhenekera chiri chinhu chako.
Iyo software inosanganisirwa neiyi SteelSeries keyboard inobvumira kusangana ne huwandu hwemapurogiramu izvo zvinoita kuti mwenje iwedzere kuchinjika uye inonakidza kupfuura mamwe makhibhodi Isu takafarira kuti iwe unogona kuibatanidza kuDiscord uye woona chaiwo mabhatani anovhenekera kukuudza iwe kuti ndiani aitaura, semuenzaniso.
Injini yeAudiovisualizer inoshandura odhiyo yekuteerera kana uchiteerera kumimhanzi, senge kuburikidza neSpotify, kana kutamba mitambo. Yakanyatsogadziriswa nemavara epamberi, kumashure uye nemafungu, zvakashambidzika uye zvine mavara zvinoenderana nezvako zvaunoda uye zvaunofarira uye kurira kuri kutamba.
Zvichakadaro, ImageSync inokutendera iwe kurodha mafaera ezvipo kune iyo keyboard uye woita kuti varatwe kunze sekuvhenekerwa. Mumufananidzo uri pamusoro, taigona kuisa Pacman sechipo chedu uye taigona kumuona achitsika-tsika chikafu chake.
Isu takadawo zvakareruka kwekuvhenekera kwewedzero iyo inobvumidza iwe kupenda boka remakiyi nekuasimbisa iwo negonzo rako - rakanaka uye riri nyore kushandisa kana iwe uchida kupenda W, A, S, D imwe chete vara uye iyo imwe imwe.
Iyo inochinja-chinja kabhodhi, asi inoshayikwa mune dzimwe nzvimbo dzinoita kuti mamwe akasara emakirabhu pane ino runyorwa abude.
Iyi zvirokwazvo inonakidza mehendibhodhi keyboard yekufunga seimwe sarudzo. Iyo Asus ROG Strix Flare inosanganisira imwe yakanaka inotonhorera RGB ichivhenekera pamativi, pamwe ne swathe yeakajairika manomano aungatarisira kubva kumakanika emitambo keyboard.
Dhizaini yayo inosanganisira Cherry MX RGB switch ine sarudzo ye red, brown, bhuruu kana nhema matema zvinoenderana nezvaunoda. Isu takaedza iyi keyboard neiyo tsvuku switch uye takaiwana isinganzwisisike kugadzikana kwemazuva ese typing mashandisirwo ichiri zvakare simba kune yakanaka mutambo wekutamba.
Iyi keyboard zvakare inosanganisira yakatsaurwa midhiya makiyi, yerabha rakapetwa, rakatsetseka scroll vhoriyamu vhiri uye yakasarudzika rekodhi macro Haina kuzara nemutoro wemakiyi asina kufanira ekuwedzera chero, saka zviri nyore kushandisa kune chero munhu.
Iyo dhizaini inosanganisirawo inonakidza miviri yakapetwa pateni apo hafu yekhibhodi uye zororo remaoko zvinosanganisira brushed-pateni kutaridzika uye kunzwa kwazviri.
Iko kune zvakare mamwe maitiro ekugadzirisa pano, sezvo ROG logo bheji pamusoro pekhibhodi inobviswa uye ichitsiva neye isina chinhu yakaiswa mubhokisi. Kukubvumidza iwe kugadzira iyo dhizaini yako neyako mamwe matikiki kana etching iyo inozovhenekerwa iwe uchiridza.
Iyo Asus ROG Strix Flare inoenderanawo ne Asus ROG Zvombo software, ichikupa mukana wekuwanda kwemwenje yekugadzirisa sarudzo dzinosanganisira Aura Sync kune akawanda maAsus mitambo yemitambo.
Kunyangwe isiri yakanakisa kiibhodhi yatakaedza, ndeyechokwadi dhizaini, yakanyatsogadzirwa uye inodhura michina keyboard iyo Asus mafeni achada.
Iyo Corsair Kubhejera K100 RGB Khibhodi Kuongorora: Optical-Mechanical Nyanzvi
Iyo Huru Kubhejera Peripheral Nhungamiro